Diiwaangelinta murashixiinta madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ka bilaabmatay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDiiwaangelinta murashixiinta madaxweynaha Soomaaliya oo Muqdisho ka bilaabmatay
Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa noqday murashixii ugu horeeyay ee magaciisa diiwaangeliya. [Xigashada Sawirka: Radio Muqdisho]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Diiwaangelinta murashixiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah ka bilaabmatay gudaha caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, sida ay sheegeen guddiga doorashada.
Madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa noqday murashixii ugu horeeyay ee magaciisa diiwaangeliya.
Diiwaangelinta ayaa socon doonta laga bilaabo 26-ka ilaa iyo 29-ka bishaan Janaayo.
31-da bishaan ayaa la filayaa in dhammaan murashixiinta is-diiwaangeliyay loo qabto dood wadaag, taasoo noqonaysa tii ugu horeysa abid ee dalka ka dhacda.
Ugu dambayna 8-da bisha soo socota ee Febaraayo ayay dhacaysaa doorashada sida weyn loo sugayo ee madaxweynaha, sida qorshuhu yahay.
March 1, 2017 Sargaal katirsanaa nabadsugida dowladda Soomaaliya oo lagu dilay qarax gaari oo ka dhacay gudaha Muqdisho